Vavaky ny fahagagana mba hanambady tsy ho ela | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaky ny fahagagana mba hanambady tsy ho ela
Vavaky ny fahagagana mba hanambady tsy ho ela
Aogositra 4, 2020
Androany isika dia hanao vavaka fahagagana mba hanambady tsy ho ela. Ny bokin'ny Mpitoriteny toko faha-3 dia nanazava fa misy ny fotoana rehetra eo ambanin'ny masoandro. Noho izany, misy fotoana tokony hahitana fanambadiana koa. Misy vanim-potoana iray manokana izay rehefa mahatratra ny olona iray dia lasa manambady ny olona toy izany. Manjary olana io rehefa tsy mahavita mipetra-potsiny ny olona iray rehefa tratran'io taona io.
Tsy ilaina intsony ny milaza fa amin'io taona io dia hisy ny fanerena avy amin'ny fianakaviana, namana ary fiaraha-monina amin'ny ankapobeny. Hiseho eny amin'ny rivotra ny fahasosorana, ary ny olona toy izany dia tsy hahita fahasambarana velively raha tsy efa milamina miaraka amin'ny mpiara-miasa izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, milaza ny fotokevitra afrikanina fa mety misy fiantraikany amin'ny fanahy tsy hita ny olona toy izany, ka manahirana ny olona toy izany ny manambady. Na izany aza, misy antony hafa mety hanakana ny iray tsy hanambady, vola kely. Rehefa tsy manana asa marin-toerana izay ahazoana vola maharitra ny olona iray, indrindra ny lehilahy, dia ho sarotra amin'ny lehilahy toy izany ny mieritreritra ny hanambady. Mahagaga fa matetika ny vehivavy dia mieritreritra fa ny lehilahy dia tsy te handre na inona na inona momba ny fanambadiana, fa ny tena zava-mangidy dia ny ankamaroan'ireny lehilahy ireny zara raha manome sakafo ny tenany fotsiny avelany hikarakara fianakaviana.
Izany no antony mahatonga ny vavaka fahagagana hanambady tsy ho ela dia hanampy be mihitsy. Tsara homarihina fa ireo vavaka ireo dia tsy hanery ny olona iray hivady; na izany aza, dia hanampy azy ireo handresy ny olona rehetra amin'ny lalan'ny olona tahaka izany izay mety manakana azy ireo tsy hanambady. Raha eo amin'ny sehatra fanambadiana ianao ary toa tsy ho sarotra aminao ny milamina, ireo vavaka ireo dia hanampy anao handresy ny tahotrao sy ny olana mahazo anao.
Ry Jesosy Tompo ô, tonga eto alohanao aho izao mba hisoratra anarana ny fanaintainan'ny foko, nanjary lasibatra fihomehezana aho tao amin'ny fiarahamonina, olona maro no nanamarika ahy entana entana taloha, ny sasany aza dia sahy mieritreritra fa nilaza aho fa ho tokana ho an'ny fiainana. Fa Ry Jesoa Tompo, manasitrana ny fery sy ratra isan-karazany ianao, mivavaka aho fa hamaly ny vavaka ataoko ianao ary omeo ahy araka ny fanirian'ny foko ao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Ray any an-danitra ô, mivavaka aho mba hisy fifandraisana haingana ao amiko sy ilay olona voatendry hanambady ahy, mivavaka aho mba hampifandray anay ianareo, mivavaka aho mba hanapotehanao ny sakana rehetra amin'ny lalantsika. Ny karazana sakana rehetra mety hanakana antsika tsy hihaona dia hamaky azy ireo amin'ny alàlan'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy aho. Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho fa rehefa mihaona amin'ny lehilahy na vehivavy voatendry hanambady aho, dia hataonao sitraka amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Tonga hanohitra ny tetika rehetra ataon'ny fahavalo aho handrava ny alitaran'ny fanambadiako, ny fahefana sy ny fahefana rehetra izay mipetraka eo amin'ny farafaran'ny fanambadiako izay nahatonga ahy ho lasa iso ho an'ireo izay tokony hipetrahako, aringako tetika toy izany amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo Ray ô, mitsangàna, ry Tompo ary aelezo ny fahavalonao. Ny fanangonana demony rehetra izay nivoady fa tsy hanambady aho na ny fahefana rehetra izay te-hanitatra ny andro fahatongavan-tsampako, raiko dia nopotehiko tamin'ny afo mandevona an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ny fidiram-bolan'ny hery rehetra mety te hamelona ahy ho fiainana, ny hery rehetra izay mety hahatonga ahy tsy hanambady an'ireo izay tokony halahatra, dia tonga amin'ny herin'ny zanak'ondry aho.
Azoko tsara fa ny fanambadiana dia firaisana izay namboarin'Andriamanitra tenany ary izany no antony nandidiana antsika hitombo sy hanoa ny tany. Izay tetika rehetra mety hahatonga ny tenin 'Andriamanitra tsy hiseho amin'ny fiainana dia potiky ny ran'ny zanak'ondry. Mijoro hanohitra ireo fotokevitry ny demonia rehetra aho izay nivoady hametraka ahy ho mpitovo mandritra ny fiainana. Izaho dia famantarana sy fahagagana ary didin'ny Tompo ny hamahantsika sy hampanjakantsika ny tany, mijoro manohitra ny hery rehetra mety te hanome ahy tokana mandritra ny fiainana aho, aringako amin'ny herin'i Jesosy izy ireo.
Ny soratra masina dia milaza fa ny iray hisintona arivo ary ny roa hisintona iray alina, izany dia manazava ny hery ao amin'ny firaisana. Manohitra ny fahefana rehetra aho, na avy amin'ny tranon'ny ray, na any an-tranon'ny reny, izay manao ny zavatra rehetra hahazoana antoka fa tsy tonga eto amiko ny fitahian'ny fanambadiana, aringako amin'ny ran'ny zanak'ondry izy ireo. Ny rakitry ny razana rehetra izay nanome ny olona talohan'ny naha-mpitovo mandra-pahafatiny dia handringana anao amin'ny ran'ny zanak'ondry.
Fa voasoratra fa milaza zavatra iray ary haorina izany, izaho manao didy fa ny lehilahy na ny vadiko mipoitra amin'ny anaran'i Jesosy. Namoaka didy aho fa navotsaka ny mpiara-miasa amiko na aiza na aiza nametrahan'ny devoly sy ny anjeliny azy ireo. Ny bokin'ny Salamo dia nilaza rehefa niantso ny anaran'ny Tompo aho, dia hofoanan'ny fahavaloko, ny fahavalo rehetra izay nanakana ahy sy ny mpiara-miasa amiko tsy hihaona mandritra ny fotoana fohy, ny hery rehetra izay niteraka fisarahana teo amiko sy ny mpiara-miasa amiko, Mandringana anao amin'ny alan'ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ambarako ny fanambadiako, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, ambara fa hanambady aho ary manapa-kevitra aho fa hankalazaina izany andro izany. Na inona na inona izay drafitry ny fahavalo handrava an'izany andro izany na hanakana azy ireo tsy hisehoana dia esoriko izany drafitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny soratra Masina fa azo antoka fa hivory izy ireo saingy ho lavo aho, ny fihaonana rehetra tsy avy aminao Tompoko amin'ny fiainako sy ny tokantranoko, hofongorako azy amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny soratra masina ary nandresy azy tamin'ny ran'ny zanak'ondry izy ary tamin'ny tenin'ny fijoroana ho vavolombelony dia nandresy ny hery rehetra izay te-hanao ahy ho lasa manana bakalorea na mpitsilo ho an'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka Fanolorana ho an'ny Loholona ao amin'ny Fiangonana
Next lahatsoratraVavaka hahazoana fanafahana trosa
Vavaka ho an'ny fandrosoana amin'ny 2021
Vavaky ny tsy mahita ny tenanao maty amin'ny nofy
Novambra 24, 2019
Fahatakarana ny herin'ny faharoan'ny apostoly